Shiinaha 3-Aamino-1, 2, 4-triazole-5-karboksiliclic acid iyo alaab-qeybiyeyaal. Waxyaabaha Cusub Hailun
Magaca badeecada:5-Aamino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid; 3-AMino-
Qaaciddada Molecular: C3H4N4O2
Miisaanka kelli: 128.09
Isticmaal:Daawada, sunta cayayaanka, dheeha dhexdhexaadka ah Tusaale ahaan, udub dhexaadka ribavirin
Caddaan ama cawl budada cad oo cad
Hadda waxaan haynaa qalab aad u horumarsan. Waxyaabahayaga waxaa loo dhoofiyaa dhinaca Mareykanka, Boqortooyada Midowday iyo wixii la mid ah, iyagoo ku raaxeysanaya caan weyn oo ka mid ah macaamiisha iibinta Warshad Shiinaha 3-Aamino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid oo loogu talagalay Dharka, Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa dhammaan macaamiisha xiisaha leh in aad nagala hadasho wixii macluumaad dheeri ah iyo xaqiiqooyin.
Warshada Iibinta Shiinaha 3-Aamino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid, Kooxdayada injineernimada pro guud ahaan waxay diyaar u noqon doonaan inay kuugu adeegaan wadatashi iyo jawaab celin. Waxaan sidoo kale kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah si aad u buuxiso shuruudahaaga. Dadaallada ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa in la soo saaro si ay kuu siiyaan adeegga ugu fiican iyo badeecada. Markaad xiisaynayso ganacsigeenna iyo alaabteenna iyo xalalkooda, fadlan nala soo hadal adoo noo soo diraya emayl ama si dhakhso leh noo soo wac. Si aad u ogaato xalalkeena iyo shirkad dheeri ah, waxaad u imaan kartaa warshadeena si aad u daawato. Waxaan guud ahaan ku soo dhaweyneynaa martida adduunka oo dhan ganacsigeenna si aan xiriir ganacsi ula abuurno. Hubso inaad dareento lacag la'aan inaad nalahadasho ganacsi yar waxaanan aaminsanahay inaan la wadaagi doonno khibrada ganacsi ee ugu wanaagsan ganacsatadeena oo dhan.
Waxaan hadda haysannaa xubno badan oo shaqaale ah oo ku wanaagsan xayeysiinta, QC, iyo la shaqeynta noocyo kala duwan oo dhibaato leh oo ka imanaya koorsada abuurka ee iibinta Hot Alaab-qeybiye 3-Amino-1,2,4-triazole-5-karboksylic acid, Ku soo dhowow dhammaan iibsadayaasha fiican waxay nala soo xiriiraan faahfaahinta xalalka iyo fikradaha !!
waxaan kuu soo bandhigi doonnaa badeecado iyo xalal aad u qiimo badan iyo xalal iyo adeegyo, sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa horumarinta warshadaha kiimikada ee gudaha iyo dibaddaba Ganacsatada gudaha iyo kuwa ajaanibta labadaba si xoogan ayaa loo soo dhaweynayaa si ay noogu soo biiraan si aan u wada korno.
Hore: 3-Aamino-1, 2, 4-Triazole
Xiga: 3-Aamino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole